The Ab Presents Nepal » जवान देखिन सेवन गर्नुस् पुदिना जवान देखिन सेवन गर्नुस् पुदिना!
जवान देखिन सेवन गर्नुस् पुदिना जवान देखिन सेवन गर्नुस् पुदिना!
पुदिना चटनी वा अचारको रूपमा तथा खानामा फ्लेवर ल्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । पुदिना ताजा एवं सुकाएर दुवै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार पुदिना स्वेद कारक, उष्ण, दीपन एवं वायु कफनाशक, भोक बढाउने, मलमूत्रजन्य रोग रोकथाम गर्ने आदि गुणले भरिएको हुन्छ । यो खोकी, अजीर्ण लगायत विविध पेटका रोगहरूमा लाभदायी छ । धेरैलाई थाहा हुनसक्छ, पुदिना सुन्दरतामा निखार ल्याउनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ|
छालामा शीतलता प्रदान गर्ने मामिलामा त पुदिनालाई सर्वोत्कृष्ट मान्न सकिन्छ । पुदिनाको मिश्रणलाई अनुहारमा लगाएर औंलाले मालिस गर्ने । १० मिनेटजति पछि सफा पानीले अनुहार पखाल्ने । यो प्रक्रिया हप्तामा दुईपटक दोहोर्‍याउने । ब्ल्याकहेड्स जरैदेखि नासिन्छ ।पुदिनामा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ जसले डन्डिफोर बनाउने कोषलाई नाश गर्छ । यसले अनुहारको काला धब्बा तथा पोतोसमेत निर्मूल पार्छ । यसका लागि पुदिनको केही पातलाई मसिनो पारेर पिस्ने । यसलाई अनुहारभरि लगाउने । केही बेरपछि सफा पानीले पखाल्ने । यो प्रक्रिया ३ दिन बिराएर नियमित रूपले अँगाल्दा डन्डिफोर तथा पोतोबाट पूर्ण छुटकारा मिल्छ ।
‘पुदिनामा एन्टीअक्सिडेन्ट हुन्छ जसले अनुहारको मृतकोष हटाउँछ ।यसले ब्याक्टेरिया मार्न मद्दत गर्छ ।’यसबाट छाला स्वस्थ एवं मुलायम हुनुका साथै गोरोपन बढ्छ ।यसका लागि पुदिनाको केही पातलाई पिस्ने । यसमा एक चिम्टी बेसार र थोरै गुलाबजल मिसाउने । यो लेपलाई अनुहार तथा घाँटीमा लगाउने र पन्ध्र मिनेटसम्म रहन दिने ।अनुहार सफा पानीले धुने । यसो गर्दा अनुहार गोरो तथा चमकदार हुन्छ’ ।
‘पुदिनाले चाउरी हटेपछि जवान देखिन सहयोग पुग्छ ।’ यसका लागि पुदिनाको केही पातलाई बास्ना आउन्जेल उमाल्ने । पुदिनाको बास्ना आउने पानीले अनुहार धुने । दिनमा दुई पटक यो प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदा छाला चमकदार, नरम एवं गोरो हुन्छ । पुदिनाको पात पिसेर लगाउनाले छाला सुन्निन र चिलाउनबाट रोक्छ ।’